समूह ‘डी’ को अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिना र नाइजेरिया भिड्ने, मुसा बिरुद्ध बिरालो बन्लान मेस्सी ?
काठमाडौं – विश्वकप २०१८ अन्तर्गत समूह ‘डी’ को अन्तिम खेल आज हुँदैछ । मंगलबार राति पौने १२ बजे हुने अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिनाले नाइजेरियाविरुद्ध खेल्दैछ । दर्शकको लागि भने यो खेलको मुख्य आकर्षण भनेको अर्जेनटिनी कप्तान लियोनल मेस्सीमा र नाईजेरीयन खेलाडी अहमद मुसा हुने पक्का छ । अघिल्लो दुई खेलमा कमजोर
एजेन्सी – अन्तर्राष्ट्रिय र कतिपय राष्ट्रिय खेलमा समेत खेल सुरु हुनुपूर्व हरेक खेलाडीका साथ बालबालिकाले पनि मैदान प्रवेश गर्ने गर्छन् । यसरी आफ्ना देशका खेलाडीको हात समातेरै आउने यी बालबालिकाहरु राष्ट्रिय गान गाउन्जेलसम्म उनीहरुसँगै उभिएका हुन्छन् । यिनीहरुलाई ‘मस्कोट’ अर्थात शुभ संकेत पनि भनिन्छ । बास्तवमा बालबालिकालाई निर्दोषपना र सरलताको
डेनमार्क र अष्ट्रेलियाको भाग्यको फैसला आज, विक्षिप्त अर्जेन्टिनाले नाइजेरियाविरुद्ध सकेसम्मको शक्ति लाउने
रूस – रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा मंगलबार (आज) ४ खेलहरू हुँदैछन् । अष्ट्रेलिया भर्सेस पेरु आज हुने पहिलो खेलमा अष्ट्रेलिया र पेरु आमने सामने हुँदैछन् । फिस्टस्टेडियममा नेपाली समय अनुसार पौने ८ बजे यी दुुई टोलीको खेल हँुदैछ । समुह सिको समुह चरणको दुवै खेलमा जित
रुस भर्सेस उरुग्वे : पहिलो हाफमा उरुग्वे २–० ले अगाडि
विश्वकप फुटबल २०१८ मा समूह चरणको अन्तिम खेलमा रुसविरुद्धको खेलको पहिलो हाफमा उरुग्वेले १–० को अग्रता बनाएको छ । खेल सुरु भएको १० औँ मिनेटमा उरुग्वेका लागि बार्सिलोना स्टार लुइस स्वारेजले फ्रिकिकमार्फत गोल गरेका हुन् । रुसका युरी गाजिन्स्किीले उरुग्वेका रोड्रिगो बेन्टान्करलाई डिबक्सबाहिर लडाएपछि उरुग्वेले फ्रिकिक पाएको थियो । स्वारेजले
उरुग्वेको वास्तविक परीक्षा रुससँग
आयोजक रुस र उरुग्वे विश्वकपको समूह ए बाट नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । समूहको यसअघिका दुवै खेलमा जित हासिल गरेको दुवै टोली समूह विजेताको छिनोफानोका लागि आज साँझ पौने ८ बजे सामारा एरिनामा भिड्दैछन् । रुसका पूर्व स्ट्राइकर आन्द्रेइ कन्चेल्स्किसले रुसी टोली अहिलेसम्मकै खराव टोलीको रुपमा टिप्पणी गरेका थिए
जापानले फर्कायाे गाेल: पहिलाे हाफ जापान १, सेनेगल १
विश्वकप फुटबल अन्तर्गत जारी आइतबारको दाेस्राे खेलमा जापानले एक गाेलकाे फर्काएकाे छ । पहिलाे हाफकाे ३४ अाैं मिनेटमा जापानका युताे नागामाेताेकाे पासमा ताकाशी इनुर्इले सुन्दर गाेल गर्दै अ‌ंकतालिकामा १-१ काे बराबरी गरेका छन् । यसैका साथ पहिलाे हाफ १-१ गाेलकाे बराबरीमा सकिएकाे छ ।
‘गट’ मेस्सीलार्इ राेनाल्डाेले व्यंग्य गरेकाे तस्वीर विश्वभरि चर्चामा
एजेन्सी – रुसमा जारी विश्वकपमा राम्रो प्रर्दशन गर्ने नसके पनि लियोनल मेस्सी मेस्सी रुपमा चिनिन्छन् । मेस्सीलाई विश्व फूटबलका सर्वेश्रेष्ठ खेलाडि मान्छन्। तर रुस विश्वकपमा भने अहिलेसम्म उनको टीम अर्जेन्टिनाका तर्फबाट जाँदू देखाउनसकेका छैनन् । स्टार भएका कारण नै विश्वकप शुरु हुनुभन्दा पहिला लियोनल मेस्सीको न्यूयोर्कको एक पत्रिकाले फोटोशूट गरेको थियो ।
लुकाकुले दिए रोनाल्डोलाई टक्कर
बेल्जियमका फरवार्ड राेमेलु लुकाकुले व्यक्तिगत गोल संख्या ४ पुर्‍याएका छन् । ट्युनिसियासँग शनिबार भएको खेलमा २ गोल गर्दै लुकाकुले याे विश्वकपमा व्यक्तिगत गोल संख्या ४ पुर्याएका हुन् । पोर्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डोले पनि ४ गोल गरिसकेका छन् । यस्तै, स्पेनका डिएगो कोष्टा र रुसका डेनिस चेरिसेभले तीन तीन गोल गरेका छन् ।
बेल्जियम भर्सेस ट्युनिसिया: हजार्डले पनि २ गाेल गरे
विश्वकप फुटबल अन्तरगत बेल्जियम र ट्युनिसयाबीच चलिरहेकाे शनिबारकाे पहिलाे खेलकाे दाेस्राे हाफकाे सुरुवातमै बेल्जियमले एक गाेल थपेकाे छ । खेलको छैठाैं मिनेटमा पेनाल्टिमार्फत गाेल गरेर टिमलार्इ पहिलाे अग्रता दिलाएका कप्तान इडेन हजार्डले खेलकाे ५१ अाैं मिनेटमा व्यक्तिगत दाेस्राे गाेल गर्दै ४-१ काे अग्रता बनाएका छन् ।
विश्वकप २०१८: अष्ट्रेलिया पहिलो जितको खोजीमा, डेनमार्क नकआउट चरणकाे दाउमा
विश्वकप अन्तर्गत रुसको समारा एरिनामा समूह बी का अष्ट्रेलिया र डेनमार्क आमने सामने हुँदा अष्ट्रेलिया पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ । त्यस्तै डेनमार्क लगातार दोस्रो जितसँगै नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयासमा हुनेछ । सुरुवाती खेलमा फ्रान्ससँग पराजय भोगे पनि टोमी जुरिक र अष्ट्रेलिया टिम विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्नेमा विश्वस्त छन्
बेल्जियम बासीले समाजसेवी यशु थापाको पहलमा गरे यती धेरै ठुलो आर्थिक सहयोग
बेल्जियम बासीले समाजसेवी यशु थापाको पहलमा गरे यती धेरै ठुलो आर्थिक सहयोग www.onlinetv nepal अझैपनि
शिशिर भण्डारीको सबैलाई रुवाउने गीत सार्वजनिक “फोटो फिरिममा”….(भिडियो सहित)
निकै लोकप्रिय गीत “फोटो फिरिममा”को मेल भर्जन सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक गीतमा अहिलेका चर्चित
स्थगित गरियो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन अनुमति
‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन अनुमति पत्र स्थगन गरिएको छ ।
बेल्जियम बासीले समाजसेवी यशु थापाको पहलमा गरे यती धेरै
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्यलाभको कामना